सियाटलबाट निस्केको नेजा : दुतावासको भित्तामा कि समुदायको चित्तमा – खुल्लामन्च : समुदायको आवाज
सियाटलबाट निस्केको नेजा : दुतावासको भित्तामा कि समुदायको चित्तमा
प्रकाशित मिति: २८ श्रावण २०७५, सोमबार
– गोकुल ढकाल
करिब एक महिना भयो, अमेरिकामा चर्चामा कम तर सबैको नजरमा रहेको संस्था नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ (नेजा)को छैंटौं अधिवेशन सम्पन्न भएको । कुनै संस्थाको चुनावताक शुभकामना र बधाईको ओईरोले भित्ताहरु रंगाउने चलन छ, हाम्रो । नेजाको चुनावका कारण गत महिना अमेरिकामा रहेका धेरै नेपालीहरुका सामाजिक संजाल रंगिए । सर्वाधिक चर्चामा रहने अमेरिकी नेपाली संस्था एनआरएनको अबको चुनाव, हुन नसकेको र शेरबहादुर दाईको मूडले छिट्टै हुनसक्ने नेपाली जनसंपर्क समिती, अमेरिकाको महाधिवेशन, भित्र-भित्रै अत्यन्त संगठित अनि न्यूयोर्क महापुराणमा लगातार पैसा तिरेको प्रवासी नेपाली मन्चको हुनसक्ने महाधिवेशन, महापुराणहरु, निर्माणाधिन सामुदायिक केन्द्रका समाचारहरु र ‘समुदायका सेवाका लागी’ खोलिएका संस्थाहरुको बढ्दो क्रेजका समाचारहरुले अनलाईनहरु भरिईरहेको समाचार फाप्ने बखत सियाटलबाट निस्किएको नेजाको चर्चा पनि चुंलिदै गएको छ ।
सियाटलमा नेजा :
प्रविधिका वादशाह बिल गेट्सको घर रहेको ठाउँ, सियाटल । सफलताका थुप्रै कथाहरु देखेका र भोगेका नेपालीहरुको एउटा गन्तब्य ! शितल मौसम र साल्मोनको लागि प्रख्यात सियाटलमा किन नेजा अधिवेशन पुग्यो भन्ने कुरो आफ्नै ठाउंमा छ । ‘बहुमतको बलमा मेरिल्यान्ड नभई सियाटल पुर्याईयो’, ‘नविन स्थानमा अधिवेशन गराउने नेजाको नजिर पहिल्याउंदै सियाटल छानियो’, ‘नेजाको सदस्य नभएको ठाउंमा अधिवेशन लगेर पेलियो’ वा ‘जे गर्‍यो तात्कालिक समितिले ठीक गर्‍यो’, भन्ने धेरै शिर्शकका लेखहरु सार्वजानिक भैसके ।
जो गयो, उसले देख्यो । तर सियाटलमा के भयो भनेर जान्न चाहनेहरु पनि छन । एउटा संस्थामा आवद्ध भएर त्यसभित्र भएका गतिविधिहरु लेख्न बोल्न नपाउने भन्ने हुंदैन । नपाउने वा संस्थाको अनुशासनले बांधेको वाहनामा खुम्चिएर रहने त्यो संस्था प्रजातान्त्रिक हुंदैन । सबैका विचार मन्थन गर्न सक्ने संस्था मात्र नेजा हुन्छ, यो पत्रकारहरुको संस्था हो भने । नेजामा रहंदामा मात्र निप दोब्र्याउने परिपाटी बन्द हुन्छ, अब । नत्र यो राजनीति गर्न खोलिएका अन्य अमेरिकी नेपाली संस्था सरह हुनेछ । आज नेजाको नयाँ समिती आएको एक महिनाको यो आलेखमा छाती फुकाएर भनिन्छ, कसैको निप दोब्रिदैंन । हरेक गतिविधीहरु छर्लन्ङ्ग पार्नसक्नुपर्दछ, यदी यो पत्रकारहरुको संगठन हो भने ।
के भयो सियाटलमा ?
आफ्नो त सियाटल पुग्न पनि भेगसमा चार घण्टा ट्रान्जिट थियो । चन्चलेहरुलाई कहिले कार्यक्रमस्थल पुगौं भन्ने हुन्छ । उद्घाटनकै दिन दिउसो २:३० बजे सियाटल झरियो । सुन्दर, शान्त र चिसो मौसमले लपक्क पारेको सियाटलको एउटा मनोहक डांडांमा रहेछ, कार्यक्रमस्थल । ‘हिजो हामी त सुत्न १५ मिनेट लगाएर अर्कै होटल गा’को’, म भन्दा एकरात अघि पुगेर सियाटलको हावा खाएका तर चामलको भातको सट्टा २० मिनेट हिंडेर पास्ता खाएका साथीहरु भन्दै थिए । कार्यक्रम आयोजना गर्दैमा सबाइ कुरा एकै ठाउं पाईने ठमेल बजारजस्तो सुलभ त सम्भव कहाँ हुन्छ र, र पनि अलि अपायक हो कि त जस्तो चाँहीं थियो है ।
बिषयगत छलफल भन्दा निर्वाचनमा केन्द्रित हुने नेपाली संस्थाहरुको परम्परालाई यसपाली नेजाले पनि निरन्तरता दियो । निर्वाचन समितिले बेलुकी ९:०० बजेदेखी भोलिपल्ट ९:०० बजेसम्मको म्याद रहेको सुचना जनायो । भागादौड, अनेकन कोठे बैठक, पदाधिकारीमा लड्न चाहनेहरुको कुदाकुद-मौनता । कतिले बुझाए त कतिले आवेदन पत्र खल्तीमा हालेर रातभर औंला भांचे, पत्र भोलीपल्टलाई सांचे ।
उद्घाटन सत्रमै निर्वाचनतिर लागेको सांझ नेजाको अधिवेशनमा भाग लिन आउने आशा गरिएका राजेश मिश्र, विजय घिमिरे, शैलेश श्रेष्ठ, गुणराज लुइंटेल, सच्ची मैनाली, ज्योतिकुमार श्रेष्ठ, सुर्य थापा, किशोर पन्थी, शिव बिष्ट, शरद पोखरेल, बिजय पौडेल, बलायर प्रत्यासी, सतिश चापागाईं, शिव मल्ल, अकुर लुईंटेल लगायतका अग्रज र सकृय पत्रकारहरु आएनन । टाढा भएर हो या माया गाढा भएर हो, रामजाने ।
उद्घाटन सत्रमा वाणिज्यदुत एसी शेर्पा सियाटल राज्यका काउन्सिल मोहन गुरुङ्ग, एनआरएन अमेरिकाको विज्ञान, प्रविधी तथा अनुसन्धान केन्द्रिय विभाग प्रमुख तथा नेजस अमेरिकाका सल्लाहकार पशुपती पाण्डे, सियाटल नेपाली समाजका अध्यक्ष माधव भण्डारी लगायत स्थानिय समुदाय र तिनका सदस्यहरुको पूर्ण तयारी, भरपुर ब्यबस्थापन र सौहार्द स्वागतले कतिपय कमजोरीहरु बिर्साईन्थे ।
महावाणिज्यदुत ॠषी ढकाल, वाणिज्यदुत एसी शेर्पा, सियाटल राज्यका काउन्सिल मोहन गुरुङ्ग, एनआरएन अमेरिकाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनिल शाह, नेपाल पत्रकार महासंघका सभापती गोविन्द आचार्य, सियाटल नेपाली समाजका अध्यक्ष माधव भण्डारी लगायत सबैलाई शुभकामनाका दुई शब्द बोल्ने मौका दिईयो तर उद्घाटनका लागि भनेर हरतरहका सहयोग गरेका, उद्घाटनका लागि नै भनेर बडेमानका दुई ठुला पानस बोकेर आएका र नेजाको तत्कालिन कार्यसमितिले माईन्युट गरेर बोल्ने अतिथीको किटान भएका पशुपती पाण्डेको नाम लिईएन ।
नेपाल पत्रकार महासंघ भन्दा प्रोटोकलले माथी रहने वाणिज्यदुतहरुलाई उद्घाटन र पुरस्कार वितरणमा छुटाईयो । सधैंं ओरालो लागेको नेपाली जनसंपर्क समितिका कार्यसमितिका सदस्यहरुको नाम त नलिगे नि के भो र ? भोलीका महासचिव भनिने एक सदस्यलाई पनि ज्ञात भएन होला, शायद । स्थानिय च्याप्टर सभापतिको नाम पनि नेजाले छुटायो । यसले थाहा हुन्छ, प्रवासी अमेरिकी नेपाली समाजमा नेजस कहाँ छ !
निर्वाचन समितिको कमजोरी :
अघिल्लो सांझको ९:०० बजेदेखी समितिले निश्चित गरेको भोलिपल्ट विहानको ९:०० बजेसम्मको अवधिमा सभापति पदमा मनोनयन नपरेको भन्दै एक घण्टा समय थप गर्‍यो । सुचना ! सुचना !! भनेर अब पुरै कार्यक्रम ‘गोरखा दरवार’ मा गर्ने भन्दै ब्रेक्फास्ट खान हिंडेको अधिवेशन लन्च सक्दासम्म ‘अपुग उम्मेद्वारी’ भन्दै पून: उद्घाटनस्थल फर्कियो ।
खाना खांदा, ‘अब सभापतिको उम्मेद्वारी नपरे’ ‘छ महिनापछी डालासमा अधिवेशन गरिने’ हल्ला फिंजाईंयो । कार्यक्रमस्थलमा कसैको उम्मेद्वारी नपरे ‘यी फलाना ……. नामहरु दोहोरिएलान’ भनेर निर्वाचन समितिले पानी पिईरहेको ठाउँमा पुर्याईएको उत्तरले निर्विवाद सभापतिका निर्विरोध उम्मेद्वार सुदिप पन्तको उम्मेद्वारी त्यसैबेला आयो । जसको केहीबेरमा ‘निर्विरोध निर्वाचित समिती’ को नामावली टांस्यो ।
केहीबेरमा साधारण सभामा प्रस्तुत बिभिन्न बुंदाहरु पारित गर्दै निर्वाचनसमितिले सुदिप पन्तको अध्यक्षतामा यो पंक्तिकार पनि सदस्य रहेको एउटा कार्यसमितिको घोषणा भयो ।
भोलीपल्ट विहानै उम्मेद्वारी वापत पैसा नबुझाईएको, पाहुनाले उम्मेद्वारको प्रचार प्रसार गरेको, पाहुनाले अर्को उम्मेद्वारको पैसा तिरिदिएको, नेजाले उपलब्ध गराएको होटेलमा नबसेर सम्पन्न अर्कै होटेलको बिल पेश गरिएको, फलानो कांग्रेसी र फलानो यो पार्टीको भन्दै उजुरी हालेका खबरहरु छ्यापछ्याप्ती भए । अफवाहमा हुलाकी बनेर लागेका कतिपय आरोपहरु असत्य ठहरिएका छन ।
तर अघिल्लो दिन घटेको त्यो घटनाहरुको बारेमा शक्तिशाली निर्वाचन समितिले केही बोलेन ।
अब नजिर दोहोरिदैंन :
प्रोटोकल मेचिने, कसैको दवावमा थिचिने, बहुमतको बलमा अपायक ठाउंमा अधिबेशन गरिने र शत्रुताको व्यबहार गरिने नजिरहरु अबको नेजाले अब दोहोर्याउंदैन । यो वाचा हो । संस्थाको नाममा हिजो खोलिन लागेको ‘समानन्तर समिती’ का नजिरहरु हामीले तोड्नुपर्छ । किन ईन्जा गठन भयो या किन सिब्जे भन्ने अर्को संस्था खोलिन लाग्यो भन्ने ठुलो ठुलो होईन । हामीले के नजिर बसायौं र हाम्रा नजिरले दुनियाँले के खिसिरिउटी गर्छ भन्ने शंका अब हामी मेट्नेछौं ।
सियाटलमा नेजाकै खाताबाट ‘सियाटल अधिवेशन खर्च’ जस्ता गरिएका खर्चहरु अब कम हुनेछन्। छाप्रोमा नेपाल पत्रकार महासंघका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले गरेको जस्तो अधिवेशन अब नेजाको हुनेछ । यो चुनौती भयो ।
दुतावासको भित्ता :
धेरै संस्थाहरु खोलिने क्रम बढेको छ, अमेरिकामा । नेजाको सियाटल अधिवेशनमा नेजाको अध्यक्ष पदका सबभन्दा पहिलो उम्मेद्वार गुणराज लुईंटेल नै उपस्थित भएनन । सियाटलमा निर्वाचन समितिले सभापतिको उम्मेद्वारी नपाउंदै गर्दा ‘खट्किएका’ लुइंटेलले सान-फ्रान्सिस्को एनआरएन सम्मेलन बखत पनि आफु सभापतिमा लड्ने जनाएका थिए । लड्ने त परै जाओस । गोरखा दरवारको भात खान उनी आएनन ।
आज उनी नवगठित ईन्जाको सभापती छन । नेजा अधिवेशनको मुखमा राजिनामा दिनु, बिषमतामा बहस गर्न सियाटल नजानु र पछि ईन्जाको सभापती हुनु, देखिनको लागि पदोलोलुपता हो । भलै, कुनै संस्था वा ईन्जाहरु गठन हुनु गुणराजजीहरुको ब्यक्तिगत हुरा हो । संस्था गठन हुनु आँफैंमा नराम्रो होईन । तर दाईको अर्ती उपदेश र व्यबहार सिकेर बुवा-आमासंग छुट्टीनु राम्रो होईन । ‘लुईंटेल आँफै संयोजक रहेको एउटा समितीले हिजो नेजामा पारित गरेका दस्तावेजहरु आज ईन्जामा छन’, नेजाका पुर्व पदाधिकारीले भन्दैथिए ।
फेरी पनि, संस्था गठन हुनु नराम्रो होईन । तर भाई-भाई छुट्टंदा समाजले धन्सारमा कसरी आगो झोस्छ भन्ने चाहीं बुझ्नु जरुरी हुन्छ ।
आज ईन्जाको कार्यक्रमको ब्यानर नेपाली राजादुतावासको भित्तामा झुन्डिनु चाँही राम्रो होईन । लुईंटेल नै उपाध्यक्ष रहेको निवर्तमान नेजा कार्यसमितीप्रती निरिह रहनु महामहिम अर्जुन कार्कीको महाभुल थियो ।
एनआरएन डालस सम्मेलनमा पाल्नुभएका महामहिम डा. साहेबले ‘फलानोले यसो भन्यो, म जस्तो मान्छेलाई ईंगित गरेर यसो लेख्यो’ भनि निवर्तमान समितिका पदाधिकारीहरुको अफिसियल भेटमा देखाएको दम्भ पनि नाजायज थियो । शायद त्यसैताक, नेजाका तत्कालिक सदस्य तथा हाल एनआरएन अमेरिकाका संचार प्रमुख बाल जोशीले अमेरिकाजस्तो देशमा नेपाली दुतावासले देखाएको हर्कतका बारेमा सेतोपाटीमा छापिएको लेखको प्रतिशोधमा निवर्तमान नेजा समितिलाई गर्ने व्यबहार शोभनीय कदापी थिएन । यथार्थपरक व्यबहारको आलेखले त्यो दुई बर्ष महामहिम, नेजा र तिनका पदाधिकारीहरुलाई देखे पनि नदेखे झैं गरी हिंड्नुभयो ।
नेजाका पुर्व सभापती आङ्गछिरिङ्ग शेर्पाको कार्यकालमा राजदुत डा. शंकर शर्मासंग भएको ‘एमओई’ को फाइल डा. कार्कीले फ्याकिदिनुभयो । कांग्रेसको होस् वा कुनै पार्टीको, तर डा. शर्माजस्तो अमेरिकी नेपाली समाजमा छाप छोड्न डा. कार्कीसंग बहुमतको सरकारको दम्भले पनि सक्दैन, यो लेखेर राखे हुन्छ ।
‘त्यही नेजाको रिसैइवीको कारण कांग्रेसको विपक्षको ईन्जा गठन भएको हो’, एक चर्चित अभियान्ताले भने । त्यो ईन्जाको स्थापना कारण होईन र नहोस् । तर राष्ट्रपती बिद्धा भन्डारीको तस्विरमुनी ईन्जाको ब्यानरमा प्रथम ऐतिहासिक कार्यक्रम हुनुचाहीं नसुहाउने काम भयो ।
‘सके तिमारु मुलाहरु नि गर न, दुतावासमा कार्यक्रम’, यो जवाफ अवश्य आउंछ भोली । फेरी पनि ईन्जा गठन हुनु आफ्नै कथा होलान । गाउंमा अर्को क्लब गठन हुंदा भलिवल खेलिने टिम पाईन्छ । यो सुखद हो । व्यबहारत: प्रोटोकलले सबैलाई समान चेप्नुपर्छ नत्र मुखिया पनि अमान्य हुन्छन, गाउंको कचहरीमा ।
समुदायको चित्त :
गिरिश पोखरेलको संयोजकत्वमा स्थापना भएको नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ अमेरिकाको प्रथम पत्रकारहरुको संगठन हो । जसरी नेपाल एकिकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाह हुन । बहसमा अनेकन कुरा आउंलान । तर ईतिहास मेटिन्न । मेरो गाउंको नाम श्रीडांडां हो, कुनै राणाहरु आएर मेरो गामको ईमान र परिचय सकेनन, न सक्छन । आज बिभिन्न नाममा खोलिने संस्थाका नामहरु नेजाका उत्पादन हुन । कुनै न कुनै रुपमा ती नेजाका छांयांमै थिए । सम्भावना, त्याग र एकताको बाटो हुंदै नेजा, ईन्जा वा भोली खिले सिबिजे जे जे भएपनि फुट्नु राम्रो होईन ।
अमेरिकामा न नेजाले संसार जोड्छ, न ईन्जाले दुनियाँ डोर्याउंछ । जोड्ने र डोर्याउने केवल अमेरिकामा सकृय समुदाय हो । नामका अगाडी अनतराष्ट्रिय राखे पनि, राष्ट्रिय या चन्द्रिय र सौर्यिय राखेपनि हामेले डल्ला फुटाउने खेत अमेरिका हो । यो खेत छोडेर कुलो शत्रुको खेतमा ल्याउछु भन्नु राम्रो नहोला । एकै खेतमा दाजुभाईका पाखुरा खियायो भने बासमती चामल पनि मार्सी चामल हुन्छ ।
भाईहरु जता लागे पनि ब्यवहार सम्हाल्ने ठुल्दाईले हो । नेजा अब अमेरिकी नेपाली समुदायको ठुल्दाई भएर सबैको चित्त बुझाउन सक्ने हुनुपर्छ ।
छुटेका परिवार :
धेरै पारिवारिक सदस्यहरु छुटेका छन्, हामीबाट । यावत कारणहरुका आ-फ्ना फेहरिस्तहरु होलान् । ती फेहरिस्तलाई दस्तावेज़ सम्झेर नेजाको घर फर्किन निम्तो फटाउनु यस समितिको प्रमुख सफलता हुनेछ । चुस्त र दुरुस्त उप-समितिहरु बनाएर संस्थालाई चलायमान राख्नु सभापति सुदिप पन्तजीको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्दछ ।
स्वार्थ र प्रचारबाट टाढा रहने सबैका प्यारा सभापतिको कार्यकालमा आईपर्ने समस्या र लान्छानाहरु हटाउन नेजा परिवार निरन्तर दत्तचित्त हुननको विकल्प छैन । ठमेलमा जहाँ सटर खाली हुन्छ, त्यहां पश्मिनाको नयाँ पसल खुल्छ । तर नेजाले हस्तकलाका असली नेपाली पश्मिना बेच्न सक्नुपर्छ । जसका लागि छुटेका परिवार भित्र्याउनु आबश्यक छ ।
कमेन्ट भए : khullamanch.com@gmail.com